Qof kasta oo jecel inay wax ka bedesho phone smart at-yaraan hal mar laba iyo toban bilood oo kasta. Casriyaynta phone smart siinayaa nabad maskaxda iyo dareenka.
Kala beddelashada xogta by qalabka fudud xidhiidhinaya PC
Qaabkan wareejinta xogta ma ku haboon tahay, laakiin waxaa laga yaabaa, waa farsamada ay u adeegsadaan si weyn dunida oo dhan.
Connect qalab Acer si aad PC xadhig USB. Computer ogaan doonaa dukaamada ku xiran dhowr ilbiriqsi gudahood. Ka dib markii dukaamada waaweyn ee la ogaado, dooro "qalab u furan si aad u eegto files" ama "aragtida files" doorasho in la furo dhammaan faylasha iyo fayl ka qalab aad.
Hadda, si fudud nuqul ka dhan fayl in aad rabto in lagu wareejiyo si aad qalab cusub android. Samee dib-up folder cusub ee aad PC iyo paste oo dhan fayl guuriyeen ka qalab Acer. Markaas, barkinta qalabka ka PC.
Connect qalab cusub android in aad PC isticmaalaya xadhig USB. Dooro "qalab u furan si aad u eegto files" ama "aragtida files" doorasho. Copy folder dib-upka ka PC, iyo si fudud u paste galka telefoonka cusub ee. Barkinta qalabka ka PC ah, iyo guuleysatey qalab android aad. Your phone cusub lagu ogaan lahaa oo dhan files wareejiyo.
Sida caadiga ah, video files, files audio, sawirada, waraaqaha qoraalka furan kartaa in ku dhowaad dhammaan qalabka android. Laakiin nasiib darro, hab fudud oo taas ah ee xogta kala iibsiga ma loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan xiriirada, fariimaha qoraalka ah, barnaamijyadooda, jadwalka taariikhda, waxay ugu baaqaysaa abuse, iyo diiwaanada kale ee telefoonka.
Si ka qalab jir wareejiyo xiriir telefoonka aad, aad u hagaagsan kartaa dhammaan xiriirada aad la leedahay Gmail ama Muuqaalka email app. Later, rakibi barnaamijyadooda email on your contacts qalabka iyo nidaamka cusub ee ka email kula telefoonka cusub ee buuga cinwaanka. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad wareejin oo dhan xiriirada aad ka phone jirka ka mid ah oo cusub.
Click to xogta ka Acer wareejiyo qalabka kale ee Android
Baahida loo qabo saacadduu waa xal software in wareejin karaan sanamyadii ma keliya, videos, iyo music, laakiin sidoo kale waa in lagu wareejiyo taariikheed, abuse wac, fariimaha qoraalka ah, iyo xiriirada ah. Wondershare MobileTrans Waxay noqon karaan qaar ikhtiyaarka ugu fiican!
MobileTrans La shaqeeya Android, WinPhone, Nokia, BlackBerry iyo qalabka macruufka. Software wareejin karaa maqal iyo video files, xiriirada, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, sawirada, jadwalka, iyo faylasha kale oo ka mid ah qalabka kale ee kaliya dhawr daqiiqadood gudahood.
Xogta laga soo qalabka macruufka in qalab Android ama BlackBerry ku shaqeeya waxaa loo tixgeliyaa inay hawsha adag. In-xaqiiqda ma jirin xal software lagu kalsoonaan karo si ay u gudbiyaan noocyo ka mid ah files u dhexeeya qalabka, laakiin Wondershare MobileTrans ayaa fududeeyey xogta habka wareejinta. Waxay kaloo ka caawisaa in la abuuro dib-up for macluumaadka telefoonka iyo tirtiro xogta laga telefoonka jir.
Wareejinta xogta aad telefoonka ee ku qasabno oo kaliya dhowr la MobileTrans
Fur codsiga aad PC ama laptop. Markaas, isticmaali xadhko USB in ay ku xidhmaan qalab Acer iyo sidoo kale qalabka kale ee Android in aad rabto in aad wareejiso xogta. Marka qalabka ay ku xidhan yihiin, MobileTrans ku tusi doonaa faahfaahin ku saabsan labada qalabka ogaado on interface ka.
Dhowr ilbiriqsi gudahood, MobileTrans ku tusi doonaa liiska faylasha in loo gudbin karaa ka phone Acer in qalabka kale ee Android.
Just guji nooca content in aad rabto in aad nuqulka, oo guji "nuqul bilow." MobileTrans Bilaaban doona wareejinta faylasha la doortay, oo aad telefoon cusub oo diyaar u ah in loo isticmaalo daqiiqo gudahood noqon doonaa.
MobileTrans Si degdeg ah helo caan sababta oo ah awoodda ay u gudbiyaan content u dhexeeya qalabka shaqeeyaan nidaamyada hawlgalka kala duwan. Codsigan waa qalab fiican ee kuwa maareeyo si ay u iibsadaan telefoonada ugu dambeeyay si degdeg ah ka dib markii ay sii daayo.
MobileTrans Sidoo kale abuuri kartaa dhameystiran dib-up folder aad mobile aad kombuutarka. Haddii ay wax qaldamaan aad dukaamada waaweyn, ama haddii aad dib goobaha warshad ay sabab u tahay arimaha qaar ka mid ah, waxaad si fudud ku xidhi kartaa qalab aad si aad PC iyo dib wax walba oo la MobileTrans.
P Codsiga waxaa kale oo ay taageertaa qalabka ku shaqeeya ay Android 6.0 Marshmallow iyo macruufka 9. Waxay bixisaa qaar ka mid ah ugu wanaagsan ee fursadaha ammaanka xogta lagu kaydiyo dib-up files.
Waa kuwee Acer qalab aad u isticmaali?
Ka sokow buug Acer Chrome C720, iyo Revo One PC, shirkadda Taiwan ayaa sidoo kale waxa ay soo jiidato macaamiisha waxyaabaha sida Iconia Mid ka mid ah 7 kiniin, Iconia A1, Acer Iconia Tab 8, Acer neo Touch S200, Liquid Jade S, Liquid Jade Z, Liquid Z 500, Acer Liquid E700, iwm Shirkadda ayaa dhammaan dhigay in aan bilowno telefoonada miisaaniyadda yar yahay, iyo murriyado ee Maraykanka sannadkan.
> Resource > Android > Sida loo xogta ka qalab Acer wareejiyo qalabka kale ee Android?